Abbasi Tv Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Abbasi Tv Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Salama daholo, androany isika dia miaraka amin'ny fampiharana fialamboly Android maimaim-poana hafa, izay fantatra amin'ny anarana hoe Abbasi TV Apk. Izy io dia manolotra anao hijery tantara an-tsehatra Pakistani sy Indiana, fantsona fahitalavitra ary andian-tantara amin'ny fahitalavitra maimaimpoana. Tsy mila manafaingana vola ianao vao mijery.
Araka ny fantatrao amin'izao fotoana izao, ny tantara an-tsehatra Pakistaney na andian-tantara amin'ny fahitalavitra no tena malaza indrindra amin'ny Internet sy ao amin'ny YouTube. Noho izany dia eto izahay miaraka amin'ny rindranasa Android tokana ahafahanao mahazo azy rehetra indray mandeha, tsy mila famandrihana na inona na inona.
Be dia be ny horesahina, koa raha te hahalala bebe kokoa momba ity app ity ianao dia mijanòna aminay. Hozarainay izay rehetra fantatray momba ity fampiharana ity.
Topimaso momba ny Abbasi TV Apk
Izy io dia fampiharana fialamboly Android maimaim-poana, izay novolavolain'ny Pakistanis. Izy io koa dia manome ny sasany amin'ireo fanampiana amin'ny teny Urdu, izay somary sarotra takarina. Azonao atao ny manala azy ireo rehefa mipoitra izy ireo, ary ampiasao izany. Misy sokajy maromaro ho an'ny zavatra rehetra.
Ho hitanao koa ny sasany amin'ireo tantara an-tsehatra malaza Tiorka, izay hantsoina amin'ny teny Urdu. Misy ny lisitr'izy ireo ny andian-dahatsoratra malaza indrindra dia Gazi Ertugrul, izay iray amin'ireo Drama malaza indrindra eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao.
Azonao atao ny mahita ny vanim-potoanan'ny Gazi ertugrul amin'ny teny Urdu nomena anarana sy ny fizarana tsirairay. Azonao atao mihitsy aza ny mijery azy mivantana amin'ny findainao amin'ny fampiasana an'io IPTV App. Hivoaka amin'ny Pak-time amin'ny 9 ora izany, mila manokatra ny fampiharana ianao ary mandeha amin'ny fiainana.
Misy fantsona Fanatanjahantena marobe, fantsona vaovao ihany koa, izay ahafahanao mahazo ny fanavaozana farany amin'ny fotoana rehetra. Tsy mila manamarina na inona na inona amin'ny fahitalavitra ianao izao. Nomenay anao ny fomba tsara indrindra hanaovana ny asa rehetra ao amin'io boaty io.
anarana Abbasi TV
Anaran'ny fonosana abbasi.tv
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.4 +
Endri-javatra lehibe an'ny Apk TV Abbasi
Misy endri-javatra maro hafa amin'ity rindrambaiko ity, hizara ny sasany amin'izy ireo aminareo rehetra aho amin'ny lisitra eto ambany. Afaka mahita endri-javatra mahavariana kokoa ianao izay mety ho tsara kokoa noho ilay boaty lehibe. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra.
Gazi ertugrul rehetra Seasons
Tantara mitohy amin'ny tele
Azo antoka ve ny mampiasa fampiharana Abbasi?
Eny, azo antoka ny fampiasana azy. Notsapainay ity rindrambaiko ity ary niasa tsara ho anay. Izy io dia fampiharana an'ny antoko fahatelo ary tsy izahay no mpamorona an'ity fampiharana ity. Noho izany tsy afaka manome anao antoka momba ny fiarovana izahay.
Ara-dalàna ve ny fampiasana ny Abbasi TV Apk?
Heveriko fa tsy fampiharana ara-dalàna izany, satria manome ny sasany amin'ireo fantsom-bola maimaim-poana nefa tsy azo antoka momba izany. Ho hitanao manokana izany. Alohan'ny hahalalanao fa ara-dalàna na tsia dia ampiasao soa aman-tsara izy io ary tsy hita ao amin'ny Google Play Store ihany koa.
Ahoana ny fampidinana ny Apk Abbasi TV Apk?
Raha te hisintona ny App Abbasi ianao. mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao eto amin'ity pejy ity, izay hita eo ambony sy ambany. Kitiho ny iray amin'izy io ary ny fanalana azy dia hanomboka ho azy. Manome kinova miasa izahay mba hahatsapa ho tsara ny mikitika azy io.
Mila manamarina ny "Source tsy fantatra" ianao alohan'ny hanombohanao ny fametrahana. Ny antony dia satria tsy maintsy omenao fidirana io hametrahana azy amin'ny fitaovanao Android. Raha vantany vao manana checkmark ianao dia azonao atao ny mametraka azy amin'ny fitaovana android anao.
Abbasi TV Apk dia fampiharana fialamboly Android maimaim-poana, izay manome fantsom-pahitalavitra, sarimihetsika ary sarimihetsika pakistaney maimaim-poana hijerena. Azonao atao ny mijery an'i Gazi ertugrul amin'ny vanim-potoana rehetra eto izay antsoina amin'ny fiteny Urdu sy ny fizarana rehetra maimaim-poana.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Abbasi TV, Abbasi TV apk, App Abbasi TV, IPTV App Post Fikarohana
Ampidino ny Kacak TV APK ho an'ny Android [2022 IPTV App]